IMMOGLU 5 Degmo oo ay socodsiisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDegmada IMMoglu 5 Waxaa socodsiiyay Madaxweynaha IMM
Degmada IMMoglu 5 Waxaa socodsiiyay Madaxweynaha IMM
14 / 08 / 2019 34 Istanbul, tareenka, SAWIRADA, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
ibb madaxweyne imamoglu ayaa u daawaday xaafada
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ku dhaqaaqay talaabo talaabo talaabo ah xaafada '5' Beerta Archaeological Park ee ka socota Aksaray Underground Bazaar, Xarunta Ilaalinta Amniga ee Yenikapi, Buundada Dahabiga ah ee 'Central Horn Metro Bridge' ilaa goob firaaqeed oo laga helay qodobo badan. Imamoglu wuxuu ka falceliyay dhismaha garoomo caag ah oo ku yaal Beerta Archaeology. Fiiri, waxay ku taal baarkinku. Hadday degmo ka dhigto Anatolia, dadku waa dad aan caadi ahayn. Ma jiraan wax laga xishoodo sida waxyaabaha meesha la dhigo. Cid kasta oo sameysa xulashooyinkaan, gebi ahaanba waan beddeli doonnaa tan. Tani waa hore ee IMM. Waxaan filayaa qofna muddo dheer maqnaa. Marka ma jirin sarkaal rasmi ah, 'waxa aniga igu xeeran' ma uusan eegin. Marka hore, dadku waxay ka bilaabaan agagaarkooda. Laakiin jasiiradani, si kastaba ha noqotee, waxay ku jirtaa cagta, dareen. Ilaa iyo hadda, ”ayuu yidhi.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Metropolitan Municipal (İBB), wuxuu shaqadiisa ku bilaabay maalinti sedexaad ee ciidaha ee xarunta dhexe ee Saraçhane. Imamoglu, oo xafiiska ka shaqeynayay in muddo ah, wuxuu ka tagay IMM duhurkii isagoo wata wiilkiisii ​​dhexe Semih iyo wafdigii la socday. Imamoglu waxaa wehelinayay ku xigeenka Xoghayaha Guud ee IMM Murat Kalkanlı, Orhan Demir iyo Murat Yazıcı iyo Madaxa Waaxda Nidaamka Rail Pelin Alpkökin. Imamoglu oo qorsheynaya inuu ku dhaadhaco Aksaray oo loo maro Archaeological Park, kuma qancin aragga. Am Beerahan qadiimiga ah waa in loo weeciyaa goob dalxiis, gezi İmamoğlu wuxuu ku yidhi shaqaalihiisii ​​wuxuuna yiri, gerekiyor Waa lagama maarmaan in dadka la soo booqdo oo la dareemo beerta qadiimiga ah. Waxaan doonaynaa in meelahaas si dhakhso leh loo cusbooneysiinayo isla markaana nidaamka lagu soo daro isla markiiba. Bal eeg tan, waa dhul aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa, arag haddii xaaladda halkan ku saabsan tahay qoditaanka ama ilaalinta. Waxaan usheegi doonaa Mahir Bey, Madaxa Qaybta Hantida Dhaqanka, waxaanan leeyahay, waxaad eegtaa.
WAA MAXAY FARSAMUUC U SAMEYNTA D
Imamoglu wuxuu caddeeyey inuu soo maray garoomo caag ah oo carruurta loogu talagalay jasiiradda taariikhiga ah. Fiiri, waxay ku taal baarkinku. Hadday degmo ka dhigto Anatolia, dadku waa dad aan caadi ahayn. Ma jiraan wax laga xishoodo sida waxyaabaha meesha la dhigo. Kaliya waxay geliyeen geeska Dahab, mid cusub, wax cusubna soo saarid. Waxaa la qabtay doorashada ka hor. 2 toddobaadyo kadib doorashadii kooxdii ciyaarta ayaa la dhigay. Qof kasta oo sameeya xulashooyinkan gabi ahaanba beddeli doona tan. Waa tan hore ee IOM. Waxaan filayaa qofna muddo dheer maqnaa. Marka ma jirin sarkaal rasmi ah, 'waxa aniga igu xeeran' ma uusan eegin. Marka hore, dadku waxay ka bilaabaan agagaarkooda. Laakiin jasiiradani, si kastaba ha noqotee, waxay ku jirtaa cagta, dareen. Ilaa iyo hadda, ”ayuu yidhi.
“Ajandeena waa u furan AÇIK
Imamoglu, oo ku hor yaal Dugsiga Sare ee Pertevniyal iyo barxadda Masjidka Valide Sultan oo lugeynaya, Aksaray Underground Bazaar halkaas oo lagu baaro. Muwaadiniintii ku aragtay Imamoglu albaabka banaadir, waxay saf u galeen inay sawiro la galaan Madaxweynaha IMM. Dhanka kale, Elif Akgül oo da'diisu ahayd 4-sano jir ah ayaa muddo dheer xirtay Imamoğlu wuxuuna sababay daqiiqado xiiso leh. Maamulka baararka dhulka hoostiisa iyo farshaxanleyda ayaa soo dhoweeyay ubaxyo iyo sacabbiga Imamoglu, oo kulan la yeeshay maamulayaasha in muddo ah. Magaca maamulka Cemal Dadasınlıoğlu wuxuu liis garabsaday dhibaatooyinka sida bacaha. Imamoglu wuxuu yiri, “Ajendeheenna waa furan yahay. Wixii dhici doona waa la fariisan doonaa oo lagula hadlayaa .. Imamoglu, farshaxanleyda suuqa iyo muwaadiniintu ma aysan jabin codsiyada sawir.
Imamoglu iyo wafdiga, Aksaray Yenipakı Metro Station ayaa mar kale cagahooda ku socda. Metro A.Ş. İmamoğlu, oo ay la shaqeenayaan shaqaalaheeda, ayaa sidoo kale indha indheyn ku sameeyay Xarunta 'Monitoring Center giren', Yenkapı Security Monitoring Center giren, oo la adeegsaday 7 bilood ka hor. Maareeyaha Guud ee Magaalada Istambul Cali Firat ayaa Imamoglu siiyay macluumaad farsamo oo ku saabsan xarunta. Imamoglu wuxuu u dabaaldegay iidihii shaqaalaha ee xarunta. Imamoglu, shaqaalaha bilowga raadiyaha ayaa u dabaaldegay ciidaha si ay u gaaraan raadiyaha. Shaqaalaha shaaha ku caba isla kursiga Semam'le Imamoglu'nun ina soo jiitey. İmamoğlu wuxuu faray kaaliyeyaashiisa inay fuliyaan daraasado ku saabsan kor u qaadida xarunta, oo ku shaqeysa salka saacadda 24.
Aabaha-AADAHA HOOS KA DHAGAYSO DALKA
Imamoglu, oo sawirro wada jir ah la qaadanaya shaqaalaha, ayaa ka raacay Yenikapi. Isagoo u sii gudbay qaybta darawalka tareenka, Imamoglu wuxuu u dabaaldegay iiddii rakaabka iyada oo lagu dhawaaqayo bartamaha. Rakaabka fahmaya in Imamoglu uu saaran yahay tareenka, waxay saf ugu jiraan inay sawirro ka qaataan Madaxweynaha IMA. Semih oo la safraya aabihiis oo taagan, Imamoglu, "Waad i qaban kartaan," ayuu ku kaftamay. Jawaabta Aabaha Imamoglu wiilkiisa, "Oooo! Muruq? Lafihiis? ” Wadahadalka u dhexeeya aabaha iyo wiilka ayaa dadka hareeraha ka dhigay qosol. Imamoglu, oo ka soo degaya tareenka Saldhigga Haliç, wuxuu arkay jasiiradda taariikhiga ah ee laga soo daawado ee ku taal buundada Haliç Metro Bridge. Imamoglu, waxa ay tahay in lagu sameeyo gacanta ugu horeysa ee ku saabsan gobolka, lala wadaago kaaliyeyaashiisa. Imtixaannada ka dib, Imamoglu wuxuu fuulay dhulka hoostiisa wuxuuna u aaday Şişhane. Imamoglu wuxuu ciidaha shacabka u dabaaldegayay tareenka aad u fara badan wuxuuna qaatay sawirro aad u badan. Semih wuxuu kaloo ka caawiyey aabihiis inuu sawirro la qaato shacabka. Imamoglu oo ka socda Shane Station illaa Tunel waxaa ku hareeraysan muwaadiniin. Imamoglu wuxuu ku warwareegayay jidadka tunnel-ka in muddo ah, wuxuu dhegeystay cabashooyinka farshaxanada.
Bursaray, Kestel wuxuu noqday degmada Bursa
Cimiladu waxay gaadhay buundada cusub
Isku-daalsiinta Isku-socodka Xagga Tareenka
Soco Gacanka Gacanka bishii Juun
Waxaan ku socon karnaa Derince Harbor
Duqa Magaalada İmamoğlu wuxuu baarayaa Dhismaha Wadada Kabataş Mahmutbey Metro Line
Madaxweynaha İmamoğlu wuxuu baarayaa Saldhigga Harem Bus-ka ee Harem Looga Reebay Meelmarinta
Madaxweynaha ATO, BozankayaGawaarida Guryaha ee Maxalliga ah
Madaxweynaha BTS oo la baadho oo uu u digay shilalka tababarka ee goobta
Qiimaynta Masaajidka Sultan
Xarunta Ilaalinta Amniga ee Yenikapı
Saldhigga tareenka ee Yenipakı
GaadiidkaPark wuxuu sugayaa muwaadiniinta lumiyay hantidoodii